Dorkasy - FJKM Tranovato Ambatonakanga
FJKM Tranovato Ambatonakanga » Dorkasy
1. NY TANTARANY
a) FOTO-KEVITRA IJOROANY
Ny anarana hoe: “DORKASY” dia nalaina avy amin’ny tantaran’ilay vehivavy mpanao asa soa sy fiantrana voalaza ao amin’ny Asan’ny Apostoly 9: 36 – 43 atao hoe Tabita. Dorkasy, na Tabita, dia vehivavy kristiana tao an-tànanan’i Jopa (faritra Atsimo any Tel-Aviv any Israely) izay natsangan’ny apostoly Petera tamin’ny maty. Araka ny voalazan’ny Soratra Masina dia be ny asa soa sy fihantrana nataon’izany vehivavy izany. Ny Dorkasy dia Sampana iray anivon’ny Fiangonana FJKM, izay ivondronan’vehivavy rehetra mihoatra ny 15 taona, na Mpandray ny Fanasan’ny Tompo izy na tsia.
b) NY NIORENAN’NY SAMPANA DORKASY AMBATONAKANGA
Tamin’ny volana Martsa 1901 no nanorenan-dRtoa Margaret EVANS vadin’i William EVANS mpitandrina misionera LMS farany teto Ambatonakanga (1899 -1948) ny Sampana Dorkasy Ambatonakanga.
Nanampy azy tamin’izany Rtoa RASOANJANAHARY vadin’Ingahy RAINIMANKAOLA mpitandrina malagasy fahefatra (1896 -1916), sy ny vadin’Ingahy ANDRIAMANANIZAO mpitandrina malagasy fahadimy (1899 -1904) teto Ambatonakanga
d) NY ASANY SY NY SEHATRASA NIMASOANY TENY AMPIANDOHANA
Tao an-tokantranon-dRtoa EVANS teny Faravohitra, nifanila tamin’ny toerana nisy ny Foibe LMS, no niandohan’ny fivorian’ny Sampana Dorkasy Ambatonakanga. ASA sy VAVAKA no fototra nijoroany.
Nahay ASA TANANA maro ny vehivavy Dorkasy, ka nalaza tokoa tamin’ny fahaiza-manjaitra sy fanaovana akanjo bà; ary izany dia niaraka mandrakariva tamin’ny fitiavam-bavaka. Isaky ny TALATA tolakandro ny fotoam-pivorian’ny Dorkasy. hatramin’ny niandohany ka mandraka ankehitriny.
Mandray anjara amin’ny ASA FANASOAVANA maro ny Vehivavy Dorkasy Ambatonakanga. Koa taloha dia samy manokana fotsimbary kely avy isaky ny mahandro vary ny tsirairay. Izany no natao hoe “Solom-bary”, izay nanampy tokantrano maro rehefa mitambatambatra. Nosoloina vola izany ankehitriny, mba hahamora ny fanaovan-javatra.
Araka ny voalaza ao amin’ny Fitsipika Fototra ny andininy faha-5 dia vina fototry ny Sampana DORKASY ny hitory sy hanambara ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy; ny hikolo sy hitaiza ny tanora sy ny ankizy ary ny olon-dehibe, amin’ny alalan’ny fampivoarana ny vehivavy manokana amin’ny lafinyrehetra (saina,vatana, fanahy).
Ankoatra ny Asa fitoriana, ny tarigetran’ny Sampana Dorkasy FJKM dia ny:
– asa soa sy fiantrana,
– fifanampiana ary famangiana
Asa fijoroana vavolombelona maro no miandry ny Dorkasy Ambatonakanga ka iarahany miasa amin’ny Fikambanana samihafa:
– Dorkasy FOIBE FJKM
– Dorkasy Synodam-paritany Iarivo Avaradrano
– Dorkasy Antananarivo Renivohitra
– Filankevitra Ekiomenikan’ny ny Vehivavy Kristiana
– Vehivavy Kristiana Mpiara-Mivavaka
– Farimbonasan’ny Vehivavy Protestanta eto Madagasikara
– Vondronasa Fitoriana ny Filazantsara (AFF FJKM…)
ARSIVA Sampana Dorkasy Ambatonakanga
5 novembre 2021 13 décembre 2021 Dorkasy
1. NY TANTARANY a) FOTO-KEVITRA IJOROANY Ny anarana hoe: “DORKASY” dia nalaina avy amin’ny tantaran’ilay vehivavy mpanao asa soa sy fiantrana voalaza ao amin’ny Asan’ny Apostoly 9: 36 – 43 atao hoe Tabita. Dorkasy, na Tabita, dia vehivavy kristiana tao an-tànanan’i Jopa (faritra Atsimo any Tel-Aviv any Israely) izay natsangan’ny apostoly Petera tamin’ny maty. Araka […]
FAHA 120 TAONA Sampana DORKASY
4 novembre 2021 13 décembre 2021 Dorkasy
Ny volana Martsa 1901 no nanorenan-dRtoa Margaret EVANS vadin’i William EVANS, Misionera LMS nitondra ny Fiangonana Ambatonakanga 1899 – 1948. Hanamarika ny faha 120 taonany araka izany ny Dorkasy Ambatonakanga . Daty tokana no anaovana ny fankalazana dia ny Alahady 14 Novambra izao araka izao fandaharam-potoana izao: @ 8ora sy sasany maraina: Fanompoam-pivavahana iarahana amin’ny FOIBE […]